ATN: banneeyey "ugu channels our" - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · ATN: banneeyey "ugu channels our"
ATN: banneeyey "ugu channels our"ATN xaq u leeyahay inuu baahiyey in 99 boqolkiiba kiisaska. Waxa uu leeyahay oo ah xubin ka mid ah qoyska lahaanshaha in SVT News ATN ee. Haddaba-hawlgalayaasha si ay u caawiyaan aad u hesho ilaa iyo mar kale ordaya - inkastoo xaqiiqda ah in gebi ahaanba qalab farsamo oo dhan qabsaday.
- Waxa laga yaabaa inaan ka dhigay hal ama laba qalad, laakiin inta badan channels our, waxaan heysanaa fasax, ayaa sheegay in xubin ka mid ah qoyska lahaanshaha in SVT News ATN ee.
ma uu muuqan magac, iskaba daa in la waraystay on camera, sida uu muujinayaa agagaarka dhismaha shirkadda ee hadda la joojiyo in Malmö. Sida laga soo xigtay isaga si, ku hawlan helaan ATN in xirmo iyo retransmit channels telefishanka shisheeye in ay yihiin lacag la'aan ah si ay u daawadaan.
- All waxaad ka arki kartaa oo naga mid ah ay awoodi karto in ay guriga u qaadato lacag la'aan ah iyada oo saxan satellite ah. Via decodes ma aha, sida ay sheegteen, bixin channels TV oo iyaga sii faafin, ayuu yidhi.
SVT Laakiin baahinta telefishanka in sida caadiga ah la bixiyaa lacag la'aan ma qabaa ma cid u gudbin karaa?
- No, laakiin si dhib leh waxay noqon kartaa wax dambi ah oo weyn, haddii dhacay in ay qaataan meel aan ogolaansho wakhti kasta. Waxaan uga jeednaa, waxa waxyeelo aan ka dhigay? Oo 99 boqolkiiba kiisaska, waxaan xaq u leedahay in ay u diraan, qaar badan oo channels waxay isku hoosta ka xariiqeen in ay advertising in ay u baxaan ee sanduuqyada our, ayaa sheegay in wakiilka ATN ee.
Isagu ma uu kala hadli doono faahfaahin ku saabsan warbaahinta waxaa lagu bilaabi doonaa mar kale "toban maalmood gudahood". At qabqabashada booliiska on Monday shiidaa qabtay oo dhan qalabka farsamada.
- Hadda waxaan si buuxda oo aan hardware. Laakiin annagu waxaannu leennahay hawlgalayaasha kuwa doonaya inay naga caawiyaan mar kale kor u adkayn, ayuu mysteriously sheegay.
Waa markii ugu horeysay oo dhan, comment ATN on dambi baadhista socda. Shirkadda ayaa suurta galayn in ay gaaraan tan iyo maalintii Isniintii, warbaahinta iyo sidoo kale kumanyaalka reer macaamiisha cadhaysan oo television screen si lama filaan ah u soo jeestay madow.
- Police xidho dhammaan fursadaha dhexdeeda munications: website, telefoonka, shuqullada. Intaa waxaa dheer, waxay ku hawlan halligaad weyn ee dhismaha, ayuu yidhi.
qolalka server faaruqa
Kor buu u muujinaysaa qolalka server madhan halkaas oo ay xadhko ku computer oo kaliya ku deldesheen. Dhowr ka mid ah albaabbada xafiisyo ku leeyihiin magac ku biiro kala duwan.
- Waxaan ku bixiyeen in quful kor, laakiin waxay kaliya kor u qarxay wax walba. Waxaan ku bixiyeen in ay soo wareejiyaan xisaabaadka iyo server, laakiin kaliya ay weerareen oo fadhiya. Waa yara sida dumin guri dhan marka raadinaya dillaac oo biyo ah, halkii ay ka weydiinaya xilgaarsiin ah.
Isagu waa shakhsi walaacsan oo ka mid ah sheegashada ilaa hadda in ka badan 200 million sameeyey dhanka ah shirkada, ka labada channels in ka dhigan tahay in waxyaabaha ay sii qaybiyey fasax la'aan ah.
- Qareenada Our fiiriya, at, laakiin waxa ay u muuqataa mid aad u buunbuuniyay. Waxa suurto gal ah waxaa laga yaabaa inuu ku saabsan bedelka on amarka of a boqol oo kun oo taaj, ayuu yidhi.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/atn-tv-boxarna-fungerar-igen-inom-tio-dagar11.11.2016. 20:46	Categories